मनोरञ्जन अन्तर्वार्ता मनोरञ्जन समाचार
May 14, 2019 May 14, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on ‘डामे तु कोसिता’ कि आश्माको क्रेज (हट तस्बिरसहित)
काठमाडौ ३१ बैशाख । नेपालको चर्चित डान्स ग्रुप ‘कार्टुन क्रुज’ कि डान्सर आश्मा विश्वकर्मा आफ्नो डान्स र टिकटक भिडियोका कारण चर्चामा आइरहन्छिन् । उनको डान्सलाई मनपराउनेको बाक्लो संख्या छ । उनको ‘डामे तु कोसिता’ च्यालेन्ज भिडियो विश्वभरका दर्शकले मन पराएका छन् । यूट्यूवमा उनको उक्त च्यालेन्जले ६ करोडभन्दाबढि भ्यूज पाइसकेको छ ।
नेपालबाट अपलोड भएको मध्ये सबैभन्दा बढि हेरिएको भिडियो फिल्म २ रुपैयाँको ‘कुटुमा कुटु’ लाई मानिन्छ । या गीतको भिडियोलाई १० करोडपटक भन्दा बढि हेरिसकिएको छ । यदि आश्माको भिडियोले यही रफ्तारमा अगाडि बढिरह्यो भने कुटुमा कुटुलाई चुनौति दिन सक्नेछ ।
भिडियोमा आस्माले दुरुस्तै एलियनजस्तै डान्स गरेकी छिन् । उनलाई धेरै देशका दर्शकहरुको सकारात्मक कमेन्ट प्राप्त भएको छ । करिब १५ हजार कमेन्टमा धेरैले अहिलेसम्म हेरेको यो च्यालेन्जको सबैभन्दा राम्रो डान्स भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘यसले प्रमाणित गर्छ कि मानिसले जे कुरा पनि एलियनभन्दा राम्रो गर्न सक्छन्,’ द वल्र्ड नामबाट पोष्ट भएको कमेन्टमा लेखिएको छ । मोहम्मद मेमोन नामका व्यक्तिले यो भिडियो हेरेर आफूले नेपाललाई माया गर्न थालेको उल्लेख गरेका छन् ।
सुनिता राईले लेखेकी छिन्, ‘आश्मा दिदीको शरीर कति लचिलो, जता लच्कायो, त्यतै लच्किने रु’ बाल हा नामका व्यक्तिले लेखेका छन्, ‘उनको हरेक मुभ पर्फेक्ट छ र यति सेक्सी गलफ्रेन्ड पाउने व्यक्ति निकै लक्की हो ।’
के हो डामे तु कसिता ?
‘डामे तु कोसिता’ एउटा स्पेनिस गीत हो जुन आजभन्दा २० वर्ष अगाडि नै रेकर्ड भएको थियो । पानामाका कलाकार एल चोम्बोले यो गीत गाएका हुन् । डामे तु कोसिताको अर्थ हुन्छ, ‘मलाई त्यो सानो चिज देउ’ । ‘सानो चिज’ भन्नाले यौनजन्य संकेत गरिएको हो ।
सन् २०१५ मा यो गीतमा एलियनले डान्स गरेको भिडियो यूट्यूवमा आएको थियो । त्यसको तीन वर्ष पछि अर्को सुधारिएको ग्राफिक्स भर्सन आयो जुन भाइरल भइरहेको छ । यो भिडियो एक महिनाभित्रै २० करोडभन्दा बढिपटक हेरिएको छ । अर्कोतर्फ यो भिडियोको कभर डान्स बनाउने विश्वव्यापी होड चलिरहेको छ जसमा बालकदेखि युवा र वृद्धबृद्धासम्म सामेल छन् ।
हट आश्मा विश्वकर्मा
पत्याउनु हुन्छ । कसैकोपनि १ मिनेको मात्र डान्स गरेको भिडियो छोटो समयमा नै १५ करोड पटक भन्दा बढी हेरिन्छ रु नेपालका कुनैपनि अभिनेत्रीको त्यस्तो छैन । तर युट्युबमा बेजोड डान्सकै कारण लोकप्रिय बनेका नेपाली डान्स ग्रुप ‘कार्टुन्ज क्रु’की एक मात्र महिला मेम्बर हुन् आश्मा ।
लामो समय देखि आफ्नो प्रस्तुति मार्फत दर्शकलाई मनोरञ्जन दिँदै आएकी आश्मालाई ग्रुपमा सबैले माया गर्छन् । उनको एउटा भिडियो डामेटोको सिटो मात्र ५९ सेकेण्डको छ । त्यही भिडियो अपलोड गरेपछि ६ करोड पटक भन्दा बढि हेरिएको छ । यही गतिमा अघि बढे सायद अब यही भिडियो नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक हेरिएको भिडियोको रेकर्डमा रहन सक्ला ।
सरोज अधिकारी लगायतका सबै साथीहरूले उनलाई कार्टुन्ज क्रुकी रानी भएको बताउँछन् । आश्माले आफ्नो डान्स मार्फत सबै नेपालीको मनमा बस्न सफल भएकी छिन्। उनको नृत्य त सुन्दर छ नै साथै उनी राम्री पनि उत्तिकै छिन्। आश्मा नेपालकी पहिलो बी र्गल हुन्। उनी अहिले निकै लोकप्रिय भएकी छिन्। ४ महिना अघि उनले अहिलेको चर्चित गीत डामे टो कोसितो को कभर डान्स भिडियो बनाएकी थिइन् र यो भिडियो अहिले देशभर भाइरल भएको छ।
हुन त यस गीतमा संसारका विभिन्न राष्ट्र र ठाउँहरूबाट बूढा बूढी देखि लिएर बच्चाहरूले समेत कभर डान्स गरेका छन् जसमध्ये आश्माको कभर डान्सलाई धेरैले मनपराएका छन्। आश्माको कभर भिडियो करोडौँले हेरेका छन् भने विश्वभरिबाट राम्रो राम्रो तारिफ आएको छ। भिडियो द कार्टुन्ज क्रुको अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत अप्रिलको ८ मा सार्वजनिक गरिएको थियो तर यस कभर भिडियोलाई थुप्रै अरु युट्युब च्यानलहरूलेपनि हालेका छन्।
आश्मा विश्वकर्मा चर्चित डान्स ग्रुप कार्टुन क्रुकी डान्सर हुन् । काठमाडौँको असनमा जन्मिएकी आश्मा सानैदेखि डान्स गर्न रुचाउँथिन् । त्यसो त उनी विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि नै बिगर डान्स गर्थिन् । मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी आश्माका बाबुआमालाई भने आश्माले रोजेको बाटो पटक्कै चित्त बुझेको थिएन ।
यो क्षेत्रमा करियर बन्दैन भनेर आफूलाई ममी–बुबाले धेरै रोक्न खोज्नुभएको आश्मा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मोडलिङमा करियर राम्रो हुँदैन भनेर मलाई यो क्षेत्रमा लाग्न स्वीकृति प्राप्त भएन ।’ त्यति हुँदाहुँदै पनि आश्माले आफ्नो सुर छाडिनन् ।
उनको ढिपीकै कारण बुबाआमा रिसाए, जसले गर्दा उनले दिनहुँजसो घुर्की र गाली सहनुपथ्र्यो । आश्माका बुबाआमाको चाहनाचाहिँ धेरै पढेर सरकारी जागिर खाओस् भन्ने थियो, तर आफ्नो इच्छा भने मोडलिङमा भएकाले उनले यसैलाई निरन्तरता दिइरहिन् । यद्यपि अहिले भने आफूले बाबुआमाको साथ–सहयोग पाउन थालेको आश्मा बताउँछिन् ।
विद्यालय तहदेखिकै रुचि
जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेझैँ आश्मालाई परिवारका सदस्यहरूले जति रोक्न खोजे पनि उनी आफ्नो इच्छालाई शक्तिमा बदल्दै अघि बढिन् । आश्मा विद्यालय तहदेखि नै आफ्नो प्रतिभा लुकाउन चाहन्नथिन् । उनी आफ्ना डान्स भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयरसमेत गर्थिन्, जहाँबाट उनले राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न थालिन् ।
त्यस्ता प्रतिक्रियाले आफूलाई अघि बढ्ने हौसला प्रदान गरेको आश्मा बताउँछिन् । यही क्रममा उनले नक्सालस्थित टंगाल माविबाट ०७० मा एसएलसी दिइन् । अध्ययनमा समेत अब्बल आश्माले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरिन् । एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि उनी कलेज अध्ययनका लागि एनआइसी कलेजमा भर्ना भइन् ।
यसरी र्जुयो कार्टुन क्रु टिमसँगको भेट
कलेजमा अध्ययनरत आश्मा आफ्नो क्षमता मजबुत बनाउन ठमेलस्थित एक डान्स सेन्टरमा भर्ना भइन् । त्यति बेला कार्टुन क्रुको टिम पनि त्यहीँ तालिम लिँदै थियो । त्यहीं उनको भेट कार्टुन क्रु टिमसँग भयो । बिस्तारै कार्टुन क्रुको टिमसँग उनको हिमचिम बढ्न थाल्यो ।
यही क्रममा टिमका क्याप्टेन सरोज अधिकारीले आश्मालाई कार्टुन क्रुमा ल्याउन चाहे । आश्मा भन्छिन्, ‘ट्रेनिङ गरिरहेकै बेला कार्टुन क्रुका क्याप्टेन सरोज अधिकारीले तिमी धेरै मेहनती छौं, तिमीले राम्रो गर्न सक्छौ, त्यसैले कार्टुन क्रुमा सँगै काम गरौँ भन्नु भयो अनि म सन् २०१२ देखि कार्टुन क्रुको सदस्य भएँ ।’
पानी पर्योले चर्चामा ल्यायो
सन् २००९ मा स्थापना भएको कार्टुन क्रुले सन् २०१२ देखि कभर भिडियो बनाउन थाल्यो । यही क्रममा क्रु टिमले सन् २०१५ मा जालमा भिडियो सार्वजनिक र्गयो, जुन भिडियोलाई युट्युबमा थोरै समयमै १० लाखभन्दा धेरै भ्युज प्राप्त भयो ।
त्यसलगत्तै टिमले ‘पानी र्पयो असिना र्झयो’ गीतको कभर भिडियो सार्वजनिक र्गयो । त्यसपछि भने आश्माको चर्चा सर्वत्र हुन थाल्यो । यो सफलता आश्माका लागि अपत्यारिलो थियो । आश्मा भन्छिन्, ‘डान्स गरेरै छोटो समयमै यति राम्रो सफलता पाउँछु भन्ने लागेको थिएन ।’ अहिले उनी कार्टुन क्रुलाई आफ्नो दोस्रो फेमिलीका रूपमा लिन्छिन् ।
परिवारले नबुझ्दा समस्या
सुरुवाती दिनमा जस्तोसुकै काममा पनि संघर्ष गर्नैपर्छ । आश्माले पनि सुरुसुरुमा निकै संघर्ष गरिन् । यो क्षेत्रबाट जीवन अघि बढ्छ भन्नेमा परिवार ढुक्क नहुँदा आफूलाई निकै समस्या भएको आश्मा बताउँछिन् । परिवारले दबाब दिएपछि आश्मा एक हप्ता डान्स नगरी बसिन् । परिवारले आफ्नो इच्छा नबुझ्दा उनलाई पीडा हुन्थ्यो अनि कोठामा बसेर रुन्थिन् ।
यद्यपि उनले आमाबुबालाई धेरै सम्झाइन् । त्यसपछि मात्र आफू सहज अवस्थामा आएको आश्मा बताउँछिन् । अहिले भने आश्माको सफलताबाट उनका आमाबुबा प्रफुल्लित छन् । उनी अहिले एउटा भिडियोमा डान्स गरेबापत ५० हजारभन्दा बढी कमाउन थालिसकेकी छिन् ।
‘डामे तु कसिता’को चर्चा
८ अप्रिलमा स्पेनिस गीत ‘डामे तु कसिता’मा आश्माको कभर डान्स द कार्टुन्ज क्रुको युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक भएको तीन हप्तामै उक्त भिडियोले एक करोडभन्दा माथि भ्युज पाएको छ । यसका साथै, आश्माको चर्चा देशविदेशमा हुन थालेको छ ।
उनको यो डान्सले निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । पानामाका गायक एल चोम्बोले गाएको उक्त गीतमा सन् २०१५ मा एलियनले डान्स गरेको भिडियो युट्युबमा आएको थियो । अहिले आश्माले दुरुस्तै एलियनजस्तै डान्स गरेकी छिन्, जसले गर्दा पनि उनको चर्चा विश्वव्यापी भएको छ ।हिमशिखर न्युजबाट साभार
एभरेष्ट बैंकले ल्यायो नयाँ स्किम, घरभाडा तिर्ने पैसाले अब घरधनी बन्न सकिने (यस्तो प्रक्रिया)
नेपाली लोक संगीतको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्दै सुश्मा ठकुरी
गितालाई देखेर मेखबहादुर किन भुतुक्क भए हेर्नुस भिडियो सहित
भाइरल युवतीको यस्तो कहानी को हुन यिनी ? हेर्नुहोस मनै लोभ्याउने केही तस्बिरहरु
सिन्धुपाल्चोकको घाटपुजा मेलामा यमन माझीले मच्याय धमाका
March 6, 2019 March 6, 2019 अखवार अनलाइन
अभिनेत्री सरीता लामिछाने विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा उजुरी दर्ता
March 29, 2019 अखवार अनलाइन